Mayelana ne-USA Awekho Amakhodi Amabhonasi Wediphozithi - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Mayelana ne-USA Awekho Amakhodi Wokungena Kwibhonasi
Posted on August 19, 2019 August 19, 2019 Umbhali Andrew	Amazwana Off Mayelana ne-USA Awekho Amakhodi Wokufaka Idiphozithi
Ngaphandle kokuthi uhulumeni wase-United States ukude nokugunyaza nokuphatha ukubheja nge-inthanethi ezingeni leziphathimandla, izakhamizi zase-US zisafuna ukufuna nokudlala imidlalo yemali yangempela ezindaweni eziningi ezivelele futhi izindawo ezifanele ze-inthanethi eziklabhu.
Lawa makilabhu 'okugembula aku-inthanethi aku-USA' agunyaziwe futhi aqondiswa yizibuko ezithembekile zasolwandle zemidlalo ye-inthanethi futhi avelele ekunqunyweni kwawo kwemidlalo ehlukene, athembela kumasu okubhanga kanye nemivuzo yenkululeko, kaninginingi, iklabhu lokugembula lase-USA alinaso isitolo esengeziwe.
Lezi zinkampani zase-US azikho izitolo eziku-inthanethi ezitolo ezi-inthanethi eziyikhadi elikhulu labasakazi bamakhadi e-web asuka e-United States ngoba zibenza bakwazi ukuhlola iklabhu yokugembula nenani lemidlalo yangempela eyaziwa kakhulu nge-100% ngeze - akukho sitolo esidingekayo, akukho ukuzibophelela kokuhlala.
Kuleli khasi uzothola konke okufanele ucabange ngamakilabhu okugembula amahle kakhulu e-USA, akukho mivuzo yesitolo (kuwebhu nakumaqembu wokugembula aphathekayo), ukuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi akukho mivuzo esitolo, yini amakhodi angeziwe, i-US eyinhloko -okuhlala abathengisi bohlelo lweklabhu futhi lokho kuyisiqalo nje.
Thatha isikhathi eside ukuthola okuqhubekayo ngokubheja kwe-inthanethi e-inthanethi e-USA, abahlinzeki bezinhlelo abahlala e-US kanye nemivuzo etholakala kubadlali base-US, ikakhulukazi mayelana ne-USA engenanzuzo yokuthola isitolo sokugembula iklabhu. Ukufakwa kuhlu kwekhuphoni - Amakhodi amakhuphoni weSlotocash Exclusive No Deposit Bonus
Umkhakha webhizinisi wokubheja osekelwe kuwebhu ubelokhu utholakala ngempumelelo eminyakeni eyedlule, lapho kuvulwa amakilabhu amasha wokugembula esakhiweni sansuku zonke, ngale migqa enikeza amaklayenti izithembiso eziningi ezihlonishwayo. Abadlali manje abasenamfucumfucu engasho lutho yezindawo ezingaba khona abazolindela, ngasiphi isikhathi ukulandela ingxenye yemiklomelo ekhangayo, noma ngokungangabazeki, kancane ngokuthola izithiyo ngenxa yokuzimisela okucebile kwemidlalo emikhulu ethintekayo. Ngokukhanyayo, imihlahlandlela yase-US ivimba amakhasimende akhona kule ndawo kusuka ekuthakaseleni inqwaba yemidlalo emangazayo, etholakala kuphela kubahlali bezizwe lapho le misebenzi ibibhalwe ngokuphelele futhi ibambelela ukucacisa izindawo.
Iqembu labantu baseMelika nokho, kusenezinketho ezimbalwa, kufaka phakathi iklabhu embalwa yezitolo yabadlali base-USA, enikeza ukudla ngokusobala kule ndawo ethile yomhlaba. Ngenxa yezitebhisi zomkhiqizo ezisetshenziswayo, izingqinamba ezisemthethweni sezixazululwe ngokuphelele, okwenza abagadi baseMelika babheka eminye imishini yokuvula enhle, okuyindlela enhle ngokumangalisayo kunoma ngubani othanda ukudlala imidlalo yeklabhu yokugembula kuwebhu.
Imiklomelo yase-USA Ayikho Idiphozithi yekhasino ingenye yezindlela ezivelele zabadlali beqembu lokugembula lokudlala ingxenye yemidlalo ethandwa kakhulu. Ngokusetshenziswa kwamakilabhu okugembula aku-inthanethi, abadlali abakaze badinge ukushiya amakhaya abo noma izihlalo zabo ukuyodlala indawo ebanzi yemidlalo yeklabhu. Ngaphezu kwalokho, koshaka bamakhadi abasuselwa e-United States, uzobona ukuthi kunezinqumo ezinhle kakhulu ezenziwa yi-USA ukuthi awekho amakilabhu okugembula eDephozithi. Amakilabhu okugembula aku-inthanethi avumela abadlali base-US ukuthi banikele nganoma imuphi umdlalo ongawucabanga, kepha ngokungeziwe banikela ngemiklomelo emihle yezitolo, nezinhlelo ezinhle kakhulu.
Uma ungena ngemvume ku-USA oyithandayo akukho club yokugembula esitolo, uzobona ukuthi iningi lizoba nokuthwebula kwesikrini komkhiqizo wabo nokuthi kuzobukeka kanjani lapho udlala; okuyindlela enhle kakhulu yokuthola iklabhu yokugembula eku-inthanethi. Ngaphezu kwalokho, uzobona ukuthi iningi lase-USA alikho amakilabhu okugembula ezitolo azobala imidlalo abazoyinikeza abadlali, futhi iningi lizonweba noma iyiphi indawo kusuka kuBlackjack, Roulette, Three Card Poker, Craps, Baccarat, Caribbean Stud, Ultimate Texas Hold'em , nemidlalo eminingi ehlukene futhi. Esimweni lapho ungeyena umuntu othanda imidlalo yetafula, amakilabhu amaningi okugembula e-USA nawo azonikeza iSlot Machines, iKeno, neVideo Poker nayo. Iklabhu eku-inthanethi labadlali base-USA ngokufanayo linemidlalo edlala amahora angama-24 nsuku zonke, nezinsuku eziyi-7 izinsuku eziyisikhombisa; okwenza ukuthi ungadingi ukukhathazeka ngokuthola iklabhu yokugembula bukhoma ukuze udlale imidlalo oyithandayo ye-inthanethi yokugembula.
Awekho amakhodi ebhonasi wekhasino ekhokhwayo:
I-75 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-GoldClub Casino
I-120 ayikho ibhonasi ye-deposit eMalibu Club Casino
I-15 yamahhala i-casino e-African Palace Casino
I-50 yamahhala e-Vegas Play Casino
I-50 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Welcome Slots Casino
I-175 yamahhala i-spin bonus e-PKR Casino
I-140 yamahhala e-JetBull Casino
I-150 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Silk Casino
I-145 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Vegas Slot Casino
I-135 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Red Slots Casino
I-165 yamahhala i-casino ku-All British Casino
I-75 yamahhala ivula ibhonasi yekhasino ku-Playgrand Casino
I-70 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Casino ephezulu
I-60 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi e-Gold Spins Casino
I-120 yamahhala i-spin casino e-William Hill Casino
I-150 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Bwin.it Casino
I-155 yamahhala e-SlottyVegas Casino
I-115 yamahhala e-Golden Riviera Casino
I-40 ayikho ibhonasi yediphozi eWinspark Casino
I-140 i-spin ibhonasi yamahhala e-Volt Casino
I-155 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-TrioBet Casino
I-90 ayikho ibhonasi yediphozi e Las Vegas USA Casino
I-140 yamahhala i-spin bonus ku-Celtic Casino
I-155 yamahhala e-spin bonus ku-21 Casino